China Omenala Small MOQ Plain Onyinye ụfụfụ ụfụfụ ntupu okpu okpu okpu factory na emepụta | Onye na-akpa ákwà
Omenala ma ọ bụ larịị
Plastic ihu asaa anya, ma ọ bụ dị ka ihe ị chọrọ
L / C, T / T, Weatern n'otu
Port nke loading:
Tianjin, ma ọ bụ dị ka ihe ị chọrọ
Mbukota: 50pcs na otu polybag, mgbe ahụ, 4 polybags n'ime katọn.Carton size: 68 * 45 * 38cm ma ọ bụ dị ka gị chọrọ.Ali awara awara ezighi ezi, biko kpọtụrụ anyị iji gosi awara awara ego.
Ibu (iberibe) 1 - 1000 1001 - 10000 10000
Est. Oge (ụbọchị) 10 14 Ndi kpakorita
Nke a okpu anyị ụlọ ahịa nwere ike inye ngwaahịa oghere ụfụfụ trucker hats,
anyị nwekwara ike inye okpu eji eme anwansị nke anyị na logos na aghụghọ gị.
Stock larịị trucker okpu nwere ike ịnapụta na 3 ụbọchị.
Printing ụfụfụ trucker okpu nwere ike delievers na 5-7days ma ọ bụrụ na gị na iji ihe na-erughị 5000pcs.
Ngwa anyị maka okpu ngwaahịa bụ 1 pc,
maka omenala na-ebi akwụkwọ logo dọkpụ okpu bụ 20pcs kwa agba / imewe.
Printing nwere ike ịbụ okpomọkụ nyefe, sublimation, ihuenyo ebipụta, UV ebipụta na-ebi akwụkwọ zuru ezu.
Anyị nwere ọtụtụ agba dọkpụ na-eme ka ị nweta ndị ahịa.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ agba ọhụrụ pụrụ iche, anyị nwekwara ike ịkarị gị.
1.Fabric 100% polyester (ụfụfụ & ntupu)
2.Color acha ọbara ọbara, oroma, ikuku ndụ, acha anụnụ anụnụ,…
3.Ha 58cm, nha ọ bụla anyị nwere ike ịhazi
4.Logo Plain ma ọ bụ na-ebi akwụkwọ (okpomọkụ nyefe, sublimation, ihuenyo, UV obibi)
5. Swweband / lining polyester, anyị nwekwara ike ịme owu, akwa ahụike
6. Ndabere plastic ikechi mmechi, anyị nwekwara ike ime metal, anwansi teepu… closures
7.Oge mbu sample: 3work ụbọchị, Bulk mmepụta: 21 ụbọchị mgbe preproduction enen
8. Mbukota 50 PC / poly / polybag, 200 PC / katọn 68 * 48 * 45cm
9. Nyefee ụzọ Site na ikuku, site n'oké osimiri ma ọ bụ awara awara, dị ka Fedex, DHL, UPS ma ọ bụ TNT
10.Port Tianjin, Shanghai, ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ
11.kwụ ụgwọ okwu L / C, T / T, Western n'otu, gram Ego, Nyefe Bank
1.The ihe dị iche iche, anyị nwere owu, acrylic, kwaaji, corduroy, woolen, naịlọn, akpụkpọ anụ, poly-owu, ajị ngwakọta na na na ị na-ahọrọ.
2.For logo, anyị nwere embroidery, e biri ebi, akpụkpọ anụ patch, metal logo, applique, anyị nwere ike omenala dị ka gị arịrịọ.
3.We na-enye OEM na ọrụ ODM, nabata na omenala.
Akara Logo maka ụfụfụ na-ebu ụfụfụ
okpomọkụ nyefe sublimation ebipụta ihuenyo ebipụta UV ebipụta
Production usoro nke ụfụfụ na-ebu ụfụfụ
Biko zitere anyị otu ase ebe a.
Ajụjụ 1: Gịnị bụ gị kacha nta iji?
Azịza: Anyị ụfụfụ trucker okpu min iji bụ 1 PC kwa agba kwa imewe
Ajụjụ 2: nwere ike anyị onwe anyị imewe / ika / logo nke ngwaahịa?
Azịza: Sure.OEM / ODM bụ nnabata.
Anyị nwere ike itinye akara ngosi gị na akara ngosi na okpu / okpu anyị, anyị ga-akwa emo maka nkwenye gị tupu ịzie.
Ajụjụ 3: Gịnị bụ ụzọ oge maka sample na mmepụta? Ego ole ka ihe nlele ahụ na-efu?
Azịza: Ọ ga-ewe banyere 5days maka sample na 14 ụbọchị maka uka mmepụta. Oge ziri ezi dabere na nhazi gị na ịtụ qty. Anyị nwere ike izitere gị ihe atụ mana a na-ebo ndị ọmụrụ nwa ebubo. Mgbe iwu kwadoro, anyị ga-akwụghachi ụgwọ nlele ahụ.
Ajụjụ 4: Kedu ka usoro usoro?
Azịza: Kwenye nkọwapụta okpu -> gosi ọnụahịa -> ihe akaebe -> gosipụta nlele -> banye nkwekọrịta, ịkwụ ụgwọ nkwụnye ego ma hazie imepụta nnukwu -> rụchaa mmepụta -> nyocha (foto ma ọ bụ ezigbo ngwaahịa) -> ịkwụ ụgwọ ụgwọ -> nnyefe -> mgbe ahia gachara.
Ajụjụ 5: Gịnị ugwo usoro na-anabata?
Azịza: Anyị na-anabata alibaba echekwa ịkwụ ụgwọ.paypal, ọdịda anyanwụ n'otu, T / T ma ọ bụ L / C na anya, ị na-akwụ ụgwọ naanị 50% ego iji malite mmepụta na itule kwesịrị ịkwụ ụgwọ tupu Ẹnam ekese. Anyị na-akwado Nkwado Azụmaahịa, nke na-ekwe nkwa ịkwụ ụgwọ gị na nchekwa na mbupu oge.
Ajụjụ 6: Olee otú ị ga-ekwe nkwa na àgwà?
Azịza: Anyị ejirila ndị ọrụ a zụrụ azụ nke ọma na ndị ọkachamara na usoro QC siri ike na njikọ njikọ ọ bụla. Na ngwaahịa ọ bụla ga-enyocha 100% tupu Mbupu.